Kusolwa umbango wamatekisi ngokuhlaselwa komndeni
ISALE imbobombobo imoto ebihamba abakwaMbeje abangabanikazi bamatekisi amaSOV abahlaselwe izolo eCato Ridge Isithombe: ER24
NONTUTHUKO NGUBANE | November 28, 2019
KUSOLWA umbango wamatekisi ngokushona kwengane eneminyaka emibili nowesilisa esehlakalweni sokudutshulwa ngoLwesibili eMkhambathini.
Umndeni wakaMbeje KwaSwayimane, ongabanikazi bamatekisi adume ngamaSOV (So Victimized), yibona okukholeka ukuthi bahlaselwe esigamekweni esenzeke ngo-9 ekuseni.
Ngokuthola kweSolezwe, abantu abayisishiyagalombili bebehamba nge-Toyota Fortuner ngesikhathi kuqhamuka amadoda amathathu avulele ngenhlamvu, ebadubula.
Kushone intombazanyana, nowesilisa kwathi abayisithupha okubalwa nomfanyana oneminyaka emithathu, balimala kanzima.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel Thembeka Mbele, uthe kuvulwe amacala amabili okubulala nawokuzama ukubulala.
“Amaphoyisa aseMsunduzi aphenya amacala okubulala, kulandela isigameko esenzeke ngo-9.15 ekuseni. “Ngokophenyo esilwenzile, imoto ebithwele abantu abayisishiyagalombili ibihamba emgwaqweni iNagle Dam. Ngesikhathi imoto yeqa ibhuloho eliseduze komtholampilo, kuqhamuke amadoda amathathu abehlome ngezibhamu. Abe esedubula kaningi, kube khona ukudubulana phakathi kwabasolwa nabebesemotweni. Abebesemotweni ababili bashonile, kubalwa intombazanyana eneminyaka emibili nowesilisa oneminyaka engu-40. Abasolwa babe sebebaleka bangena ehlathini. Imbangela yokuhlaselwa kwabo ayaziwa, uphenyo lusaqhubeka,” kusho uColonel Mbele.
Okhulumela i-ER24, uMnuz Russel Meiring, uthe abasindile babalaphile babaphuthumisa esibhedlela.
“Sihlole ababili sathola ukuthi sebeshonile, akukho ebesingakwenza ukubasiza. Abanye abayisithupha abalimele baphuthunyiswe yimoto emtholampilo. Emtholampilo sihlole abalimele, sathola ingane yomfana ilimele kakhulu, nabadala abahlanu abebelimele kancane. Ingane yomfana ibe isifakwa kwindiza enophephela emhlane yaphuthunyiswa esibhedlela.”
Ukuhlaselwa kwamatekisi eSOV kusuka kude njengoba sekunenqwaba yezidumbu ngenxa yawo. Kusolwa umbango womzila.
Amatekisi akhona ahambela eMgungundlovu, Mayville, eThekwini, nasezindaweni eziseduze naKwaSwayimane.
NgoFebhuwari 15, 2015, kwabulawa umnikazi walawa matekisi ngemvula yezinhlamvu ekwakhe, uMnuz Mphayikeli “Ntshebe” Mbeje (55).
Isolezwe ngoDisemba 2016 labika ngokubulawa komshayeli wama-SOV wakhona KwaSwayimane
UMnuz Simphiwe “Mphiwe” Mbeje (22), owadutshulwa ehamba ngeToyota Quantum.
NgoSepthemba 2016, Isolezwe laphinde labika ngomgibeli owaqotha ngenhlamvu abathathu etekisini okubalwa nomfundisi owayevela enkonzweni.
Imenenja ehhovisi leSantaco KwaZulu-Natal, uMnuz Sfiso Shangase, izolo ikugxekile lokhu okwenzekile yathi kumele osomatekisi bayeke ukubulalana.
“Sesiqala ukudideka ukuthi kumele sithini ukuqeda udlame embonini? Sihlezi sisho ukuthi uma kukhona ukungaboni ngaso linye abeze ehhovisi elikhulu sixazulule inkinga. Sidlulisa amazwi enduduzo emndenini, nabalimele balulame ngokushesha,” kusho uShangase.
Imizamo yokuthola abakwaMbeje ayiphumelelanga njengoba izinombolo abashayelwe ucingo kuzo bezivaliwe.